Liiska 10-ka Tababare ee ugu mushaarka badan horyaalka Premier League… (Halkee ayey kaga jiraan Guardiola iyo Klopp?) – Gool FM
Liiska 10-ka Tababare ee ugu mushaarka badan horyaalka Premier League… (Halkee ayey kaga jiraan Guardiola iyo Klopp?)
(England) 27 June 2019. Tababaraha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa hogaaminaya liiska tababarayaasha ugu mushaarka badan horyaalka Premier League.
Wargeyska “Mundo Deportivo” ayaa daabacay warbixin uu ku ku sharaxayo tababarayaasha ugu mushaarka sareeya horyaalka Premier League.
Pep Guardiola oo liiskan kaalinta koowaad ka galay ayaa wuxuu sanadkii mushaar ahaan kaga qaata kooxda Manchester City aduun dhan 20 milyan oo euros, waana in ka badan tababarayaasha kale.
Macalinka kooxda Tottenham ee Mauricio Pochettino ayaa liiska tababarayaasha ugu mushaarka badan horyaalka Premier League wuxuu ka soo galay booska labaad, wuxuuna sanadkii mushaar ahaan u qaataa 8.5 milyan euro, halka tababaraha kooxda Liverpool ee Jürgen Klopp uu galay kaalinta 3-aad wuxuuna sanadkii mushaar ahaan u qaataa 7.5 milyan euro.
Intaa waxaa sii dheer, tababaraha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa kaalinta 4-aad kaga jira liiskan wuxuuna mushaharka ahaan u qaataa sanadkii 7.5 milyan euro, halka Manuel Pellegrini oo tababare u ah kooxda West Ham uu ku jirto kaalinta 5-aad isagoo mushaar ahaan u qaataa 7 milyan euro.
Macalinka kooxda Arsenal ee Unai Emery ayaa ka maqan liiska 5-ta tababare ee ugu mushaarka sareysa horyaalka Premier League, wuxuuna ku fadhiyaa booska 6-aad mushaar dhan 6 milyan euro, macalinka Southampton ee Ralph Hasenhüttl ayaa helay booska 7-aad.
Waxyaabaha ugu yaabka badan ee lagu dhex arkay liiskan lasoo saaray ee ah tababarayaasha ugu mushaarka sareeysa horyaalka Premier League, ayaa ah in Frank Lampard uu kasoo galay kaalinta 8-aad wuxuuna sanadkii mushaar ahaan u qaataa 5.5 milyan euro, laakiin mushaarkiisa kor ayuu u kici karaa waa hadii uu tababare ka noqdo kooxda Chelsea.
Tababaraha Leicester City Brendan Rodgers ayaa kaalinta 9-aad kaga jira liiskan wuxuuna mushaar ahaan u qaataa sanadkii 5 milyan euro, halka tababaraha kooxda Bournemouth Eddie Howe uu kaalinta 10-aad ku soo galay in sanadkiiba uu mushaar ahaan u qaato qiimo dhan 4 milyan euro.